Tuesday November 19, 2019 - 08:41:15 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Garomada diyaadhuhu waa kabayasha dhaqaale e ugu casrisan aduunka sida aynu maqaallkeni Hore ku xusnay bal Hadaba aynu tusaale u soo qaadano dhawr garoon diyaraded oo dalka ay ku yaalan wax ka badalay xaga isu socodka iyo fududaynta Dulimaadka si lamida
kobcinta dhaqalaha iyo isku xidhka aduunka.
Magalada London E UK o Qudha waxa Ku Yaal Lix Garoon o Ay
DIyaradahU isticmalan waxana lakala Yidhahda:
Dhamantodna Wa garoma casriya o si wanagsan u Dhisan Halka Garon e somalida Safraysa ay Badana Isticmalan waa &quot;London Heathrow Airport&quot; waana garoon aad u wayn isla markana aad u mashquul badan isla markana
kaal maha hore kaga jira garomada aad ka u wanaagsan e dunida waxaa isticmala 80 diyaradod Sida Diyaradaha British airways, Ethiopian airline,
Turkish Airline, Virgin Atlantic, Emirates iyo kuwa kale Waxa una leyahay Afar TERMINAL o aad u Wayn.
Garoonkan Heathrow e London waa garoonka kowaad e ugu mashquulka badan Qaarada EUROPE waxa labeeya o ku soo xiga Paris-Charles De Gaulle
waa garoonka magalada paris ee.
London Heathrow airport waxa u ka qayb qaata kobcinta dhaqalaha e magalda London iyo guud ahaanba dal waynaha united kingdom iyo waliba qaarada Europe. Heathrow maaha kaliyata garoon faa’ido u leh EUROPRE o qudha balse wa garoon aad ugu muhiima dulimaadka caalamka waxa una isku xidha aduun waynaha qaarad ilaa ka qaarad waxana laga samayay duulimaadki aduunka u dheer 19 sacadood waxana laga
tagayay magalda London garoonkeda calimiga ah ee London heathrow ilaa sydeny airport waxana samaysay diyarda Qantas airways o ah diyarada 7aad e ugu wanaagsan aduunka.